जनतापाटी शुक्रबार, मंसिर १७, २०७८ मा प्रकाशित
डडेल्धुरा । शुक्रबार ३०औं अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता दिवस विश्वभर मनाइँदै छ। प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता दिवस मनाइँदै आए पनि डडेल्धुराका अपांगता भएका व्यक्तिहरूका समस्या भने ज्यूँका त्यूँ छन्। अपांगता दिवसले आफूहरूको पीडामा मल्हम लगाउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।
‘परिचयपत्र मात्र पाएको छु। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा अगाडि नै मेरो परिचय पत्र बनेको हो। तर, अमरगढी नगरपालिकाले स्थानीय तहमा परिचयपत्र वितरण कार्यविधि-२०७६ बनाएको भन्ने सुनेको छु,’ उनले भने, ‘तर, फिल्डमा गएर काम गर्दा साथीहरूले परिचयपत्र नै नपाएको गुनासो गर्छन्। स्थानीय सरकारले हाम्रो क्षमता अभिवृद्धिका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि कार्यक्रम गरेको छैन्।’
अमरगढी नगरपालिकाको तथ्याङ्कअनुसार २०७६–०७७ सालदेखि हालसम्म अपांगता भएका व्यक्ति १३४ जना छन्। नगरपालिकामा क, ख, ग र घ गरि चार वर्गका अपांगता भएका व्यक्तिलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको छ। जसमा क वर्गमा २९ जना, ख वर्गमा ६१ जना, ग वर्गमा ३५ जना र घ वर्गमा नाै जना छन्।
‘स्थानीय तहले हामीहरूका लागि नीति निर्माण गरेको छ भन्ने सुनेपनि त्यसले जीवनमा खासै प्रभाव पारेको छैन्। मेरो त अहिलेसम्म अपांगता परिचयपत्रसमेत छैन्। अब गाउँमा आउँछन् भन्ने सुनेको छु। खोइ! कहिले आउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘विद्यालयमा पनि साथीहरूले हेयको दृस्टिकोणले हेर्छन्। हामीहरूले सहज रुपमा शिक्षा पनि लिन सकेका छैनौं।’
विद्यालयमासमेत शिक्षकले अरु विद्यार्थीसरह आफूलाई पनि पढाउने गरेकोले पठनपाठनमा समेत समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ। अपांगता भएका व्यक्तिको जीवन स्तर र अन्य व्यक्तिको तुलनामा बेरोजगारी दर उल्लेख्य छ।
गणेश बोहोरा (नाम परिवर्तीत) को ६ जनाको परिवार छ। दुईवटा छोराछोरी विद्यालयमा पढ्छन् भने घरमा वृद्ध आमा र श्रीमती छन्। गणेशको ‘क’ नम्बरको परिचयपत्र छ। सोही कारण उनले मासिक तीन हजार रूपैयाँ पाउँछन्। तर, मासिक आउने तीन हजार रूपैयाँले खान लगाउन नपुग्ने उनी बताउँछन्।
के भन्छ अमरगढी नगरपालिका ?
मधेश प्रदेशबाट गठबन्धनका मोहम्मद विजयी ९ मिनेट पहिले
प्रदेशको नाम र राजधानीमा एकरुपता कायम गर्न मधेश सरकारको आग्रह २३ मिनेट पहिले
राष्ट्रियसभामा राष्ट्रिय जनमोर्चाकाे प्रवेश, गठबन्धनले गर्दा पायो एक सदस्य ५३ मिनेट पहिले